Privacy waa xaq u leedahay inaad socodka ku haboon macluumaadka.
Meel saddexaad oo ay cilmi-baadhayaashu ku adkaan karto waa qarsoodi . Sida Lowrance (2012) ayaa si cad u qeexday: "Asturnaanta waa in la ixtiraamaa sababtoo ah dadku waa in la ixtiraamo." Qarsoodi, si kastaba ha ahaatee, waa fikrad murugo leh (Nissenbaum 2010, chap. 4) , iyo sida, waa mid adag si aad u isticmaasho markaad isku dayeyso inaad sameyso go'aamada gaarka ah
Habka caadiga ah ee looga fekerayo asturnaanta waxay la socotaa diopotomy dadweyne / mid gaar ah. Sida habkan fekerka ah, haddii macluumaadka si rasmi ah loo heli karo, markaa waxaa isticmaali kara cilmi-baarayaasha iyada oo aan wax welwel ah oo ku saabsan jebinta asturnaanta dadka. Laakiin habkani wuxuu u gudbi karaa dhibaatooyin. Tusaale ahaan, Bishii Nofembar 2007, Costas Panagopoulos ayaa waraaqo ku saabsan doorashooyinka soo socota ee saddexda magaalo oo dhan ku soo diray. Laba magaalo-Monticello, Iowa iyo Holland, Michigan-Panagopoulos ayaa ballanqaaday / hanjabay in ay daabacaan liiska dadka ku codeeyay wargeyska. Magaalada kale-Ely, Iowa-Panagopoulos ayaa ballan qaaday / ku hanjabay in ay daabacaan liiska dadka aan ku codeynin wargeyska. Daawooyinkan waxaa loogu talagalay in ay abuuraan sharaf iyo xishood (Panagopoulos 2010) sababtoo ah dareenkaasi ayaa lagu ogaadey inuu saameyn ku yeeshay daraasadaha hore (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Macluumaadka ku saabsan kuwa codka ka dhiibanaya iyo kuwa aan ku jirin Mareykanka; qof kastaa wuu heli karaa. Sidaas, mid ayaa ku doodi kara in sababta oo ah macluumaadka codbixinta hore ay tahay mid dadwaynaha, wax dhib ahna kama qabo cilmi-baaraha wargeyska. Dhinaca kale, wax laga sheego dooddan ayaa dareensan in ay khalad tahay dadka qaarkood.
Sida tusaalahan tilmaamaya, diopotomy-ka dadweynuhu waa mid aad u liidata (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) . Habka ugu wanaagsan ee looga fikiro asturnaanta-mid gaar ah ayaa loogu talagalay in lagu xalliyo arrimo ay da'doodu da'da dijitalka ah -waxaa fikrad ka haysta sharafnimada macnaha (Nissenbaum 2010) . Halkii laga fiirsan lahaa macluumaadka sida dadwaynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay, sharafnimada macnaha ayaa diiradda saareysa socodka macluumaadka. Sida laga soo xigtay Nissenbaum (2010) , "xaq u leedahay inaad u gaarka ah ma xaq u leedahay inaad sirta ama xaq u leedahay in la xakameeyo laakiin xaq u leedahay inaad socodka ku haboon macluumaadka shakhsiga ah."
Qodobka muhiimka ah ee asaasiga ah ee asaasiga ah waa nidaamyada wargelinta macnaha guud (Nissenbaum 2010) . Kuwani waa qawaaniin u hoggaansamaya socodka macluumaadka ee goobo gaar ah, waxaana lagu go'aamiyaa saddex seddax:
jilayaasha (maado, diraha, qaataha)
sifooyinka (nooc ka mid ah macluumaadka)
mabaadi'da gudbinta (caqabadaha ka yar oo macluumaad la barwaaqaysan)
Sidaa darteed, markaad tahay cilmi-baaris ayaa go'aamineysa in xogta la isticmaalo aan rukhsad u lahaan karin in la waydiiyo, "Tani ma isticmaashaa habdhismeedka xeerarka macluumaadka ku xeeran?" Ku noqoshada kiiska Panagopoulos (2010) , kiiskan cilmi-baaristu waxay daabacdaa liisaska codbixiyayaasha ama kuwa aan xuduudaha lahayn ee wargeyska u muuqda inay u badan tahay inay ku xad gudbaan xeerarka macluumaadka. Tani maaha sida ay dadku u filanayaan macluumaadka ay ku socdaan. Xaqiiqdii, Panagopoulos ma raacin ballan-qaadkiisa / khatarkiisa sababtoo ah saraakiisha doorashada ee degmada ayaa raadinayay waraaqaha isaga oo ku qanciyay inaanay ahayn fikrad wanaagsan (Issenberg 2012, 307) .
Fikradda astaamaha macquulka ah ee macquulka ah ayaa sidoo kale ka caawin kara qiimaynta kiiskii aan ka hadlay bilowgii cutubka ee ku saabsan isticmaalka tilifoonada taleefanka gacanta si loo ilaaliyo socodka intii lagu jiray dillaaca Ebola ee ka dhacay Galbeedka Afrika sannadka 2014 (Wesolowski et al. 2014) . Xaaladdan, mid ayaa qiyaasi kara laba xaaladood oo kala duwan:
Xaaladda 1: diraya xogta log call dhamaystiran [sifooyinkii]; in dowladaha iyo shacabka Soomaaliyeed dhamaystirnayn [jilayaasha]; mustaqbalka kasta oo suurtagal ah u isticmaalaan [mabaadii'da gudbinta]
Xaaladda 2: diraya diiwaanka qayb qarsoodiya [sifooyinkii]; baadhayaashu jaamacadda ixtiraamo [jilayaasha]; si loogu isticmaalo jawaabayo cudurka Ebola oo ku xiran kormeerka ee jaamacadda loox anshaxa [mabaadii'da gudbinta]
Inkasta oo labada xaaladoodba ay soo wacaan xogta ay ka soo baxayaan shirkadda, qiyaasaha wargelinta ee ku saabsan labadan xaaladood isku mid maaha sababtoo ah kala duwanaanta u dhaxeysa jilayaasha, sifooyinka, iyo mabaadiida isgaarsiinta. Fiirada kaliya hal ka mid ah xuduudahaan waxay u horseedi kartaa go'aamo aad u sarreeya. Xaqiiqdii, Nissenbaum (2015) xoojinayaa in mid ka mid ah saddexda xuduudahaan lagu yarayn karo kuwa kale, mana midkoodna midkoodna si Nissenbaum (2015) ah u qeexi xeerarka macluumaadka. Qaabkani saddex-cabbirka ee xeerarka macluumaadka ayaa sharraxaya sababta dadaaladii hore ee diiradda saarey sifooyinka ama mabaadiida is-gaarsiinta-waxay ahaayeen kuwo aan waxtar lahayn markii ay qabteen fikradaha guud ee qarsoodiga ah.
Mid ka mid ah caqabaddan adoo isticmaalaya fikradda hab-raaca macluumaadka xuduudaha ah ee tilmaamaya go'aamada ayaa ah in cilmi-baarayaashu aaney wakhti hore ka warqabin oo ay aad u adag tahay in la cabbiro (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) . Intaa waxa dheer, xitaa haddii cilmi-baaristu ay jabinayso qawaaniinta macluumaadka ku-salaysan ee macquul ah oo aan si toos ah ugu jeedin in cilmi-baaristu aysan aheyn. Xaqiiqdii, cutubka 8 ee Nissenbaum (2010) waa gebi ahaan "Xeerarka Dhimista ee Wanaagsan." Inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin, xeerarka macluumaadka macquulka ah ayaa weli ah hab wax ku ool ah oo looga jawaabayo su'aalaha la xidhiidha asturnaanta.
Ugu dambeyntii, asturnaanta ayaa ah aag aan aragno is faham la'aan u dhexeeya cilmi-baarayaasha oo mudnaan siinaya ixtiraamka dadka iyo kuwa mudnaanta leh faa'iidada. Ka fikir keeska cilmi-baarayaasha caafimaadka dadweynaha, oo dadaal loogu jiro in laga hortago faafidda cudurada faafa ee casriga ah, si qarsoodi ah u daawadey dadka qubeyska. Cilmi-baadhayaasha oo diiradda saara Beneficence waxay diiradda saari doonaan faa'iidooyinka bulshada ee cilmi-baaristaan ​​waxaana laga yaabaa inay ku doodaan inaan wax khasaare ah u geysan kaqaybgalayaasha haddii cilmi-baaristu ay samaysay basaasnimo iyada oo aan la ogaan. Dhinaca kale, cilmi-baarayaasha oo mudnaanta siinaya Xushmadda Dadka ayaa diiradda saari doona xaqiiqda ah in cilmi-baaristu aysan ula dhaqmin dadka leh ixtiraam iyo laga yaabo inay ku doodaan in waxyeelada loo abuuray ay ku kacday xadgudub qarsoodi ah ka-qaybgalayaasha, xitaa haddii ka-qaybgalayaashu aysan ka warqabin basaasnimada. Si kale haddii loo dhigo, qaar ka mid ah, ku xadgubka asturnaanta dadka waa waxyeelo ah oo keligiis ah.
Ugu dambeyntii, markaad ka hadlayso arrimaha gaarka ah, waxa ay caawineysaa in aad ka gudubto xad-dhaafka dadweynaha / shakhsiyaadka gaarka ah ee gaarka ah iyo in ay sabab u noqdaan nidaamyada macluumaadka macquulka ah, kuwaas oo ka kooban saddex qaybood: jilayaasha (mawduuc, dire, alaab), sifooyin (noocyada macluumaadka), iyo mabaadiida is-gaarsiinta (caqabadaha hoos yimaada macluumaadka qulqulaya) (Nissenbaum 2010) . Qaar ka mid ah cilmi-baadhayaashu waxay qiimeeyaan asturnaanta marka la eego dhibaatada ka dhalan karta xadgudubkeeda, halka cilmi-baarayaasha kale ay u arkaan xadgudubka asturnaanta inay tahay waxyeello gaar ah oo keligiis ah. Sababtoo ah fikradaha gaarka ah ee nidaamyada dhijitaalka ah ayaa badalaya waqti ka dib, waxay u kala duwan yihiin qof ilaa qof, waxayna kala duwanyihiin xaaladda xaaladdan (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , waxay u egtahay inay tahay ilo adag oo ah go'aannada anshaxa ee cilmi-baarayaasha qaarkood wakhtiga soo socda.